» ओम बाबाको धन्दा-छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ कि पर्दैन ?
ओम बाबाको धन्दा-छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ कि पर्दैन ?
२०७५ आश्विन ४,बिहीबार १०:३०
आफूमा विशेष दैवीशक्ति भएको अफवाह फैल्याउँदै सर्वसाधारणलाई उपचार गर्ने बाहनामा लूट मच्याउन सफल ओमप्रकाश श्रेष्ठ उर्फ ओमबाबा मकवानपुर आएको केहीसमयमै अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल भए । पाल्पाको रिडीमा प्रख्याती कमाएको भनी प्रचार गरिए पनि उनको पाल्पा वर्हिगमन सुखद थिएन ।
ओमबाबा नामधारी श्रेष्ठ मकवानपुर आउँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ९ नम्बर वडामा कोठाभाडा लिएर बसेका थिए । सर्वसाधारणलाई दैवीशक्तिको माध्यमबाट निको पार्न सफल भएको अफवाहा फैल्याउन उनका पछाडी थुप्रै भक्त भनिनेहरु सक्रिय छन् । चिकित्सकले समेत निको पार्न नसकेको बिरामी निको पारेको भनी प्रचार गराउन यी बाबाले एउटा समूह नै सक्रिय गराएका छन् । झारफुक माथि विश्वास राख्ने अन्धबिश्वासी नेपाली समाजमा ठगी धन्दा चलाउन उनले गतिलो उपाय लगाए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मयुरधापमा केही नम्बरी जग्गा किनेर, केही ऐलानी जग्गा हडपेका यी बाबाले धाम बनाउने नाममा चन्दा संकलन गरे । उपचारका लागि आउने यी बाबालाई भेट्न अनिवार्य ५ सय रुपैयाँ टिकट काट्नुपर्ने नियम बसाले । ओमबाबा आरोेग्य आश्रमको सदस्यका लागि थप १५ सय रुपैयाँ तिरेपछि मात्र उनलाई भेट्न सकिने नियम बनाईएको छ । त्यति मात्र होइन पुजा विधिका लागि धुप बत्ती, फलफुल, र आवश्यक पूजा सामाग्री समेत उनकै आश्रमले तोकेको स्थानमा लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ ।
उनका नजिकका भक्तहरुको घरलाई लजका रुपमा प्रयोग गरेका यी बाबाले हेटौंडाकै मानिसलाई समेत उपचारका लागि एक हप्ता लाग्ने भन्दै आश्रम नजिककै भक्तकोघरमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । टाढाबाट आउनेहरुलाई त बाबा ध्यानमा हुनुहुन्छ केही समय कुर्नु भनी समयमै भेट नदिएर रात नै बस्न बाध्य बनाउने गरिएको छ ।
हेटौंडा ११ की ४१ वर्षिया मृतक साबीत्री पुडासैनीपनि उपचारका लागि बाबाका भक्त विनय भेटुवालले सञ्चालन गरेको लजमै बसेकी थिईन् । उनले आफु नजिककै केही मानिस प्रयोग गरी नक्कली बिरामी खडा गर्दै निको पारेको अभिनय गराएर नव आगन्तुकहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् । कहीलेकाही बेहोस भएर लडेका केही बिरामी केहीसमयपछि आफै होस् खुलेर ब्युझिदा आफ्नो मन्त्र शक्तिका बलले ठिक भएको भनी दावी गरेर प्रख्याती कमाउन सफल यी बाबाले मृतक साबित्री पनि केहीसमयमा होस् खुलेर आफै ब्युझन्छिन् र त्यही मौकामा आफ्ना भक्तहरुबाट जयजयकार गराउन सक्छु भन्ने मनसायले अस्पताल लान दिएनन् । मृतककी छोरीले अस्पताल लैजान्छु भन्दा उनका भक्तहरुले तिमी ठीक ठाउँमा आएकी छौँ । चिन्ता लिनु पर्दैन ठीक हुन्छ भन्दै रोकेका थिए । उनका भक्तहरुले बाबाकै इशारामा काम गर्ने गरेका छन् ।
मृतक : साबित्री पुडासैनी
बाबाकै आदेशमा १५ मिनेटमा १० बोतल पानी पिउनु पर्छ भनी मृतकलाई बाबाका नजिकका सहयोगी विनय भेटुवालले पानी दिएका थिए । त्यो पानीमा केही मिसाईएको थियो थिएन त्यो त मृतक साबित्रीको पोष्टमार्टम रिपोर्टले बताउँला । यद्यपी एउटा सामान्य मानिसले १५ मिनेटमा १० लिटर पानी पचाउन सक्ला ? पानी पिउन गा¥हो परेपछि बाबाका नजिकका सहयोगी बिनयलाई नै सोधेर मृतक साबित्री शौचालय नजिक बसेर पानी पिईरहेकी उनकी छोरीले बताएकी छिन् ।
पानी अमृत जल नै हो तर, पचाउनै नसक्नेगरी मानिसलाई सेवन गराउनु जायज मान्न सकिँदैन । सर्वसाधारणलाई रोग निको पार्छु भन्दै विशेष तिथिहरुमा आश्रममा विशेष समारोह गरेर अकुत सम्पति कमाएका यी बाबाले उपचार गर्ने अनुमति कुन निकायबाट लिएका छन् ? अस्पताल, क्लिनिक, औषधि पसल सञ्चालन गर्न समेत नेपाल सरकारको स्विकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर धार्मिक संस्थाको आडमा यी बाबाले लुट मच्चाई रहँदा समेत स्थानीय प्रशासनले यस्ता बाबाहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छैन । मुलुकी फौजदारी संहीता ऐन २०७४ मा समेत इलाज सम्बन्धि कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट इजाजत पाएका ब्यक्तिले मात्र उपचार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नियमकनून कै धज्जी उडाउँदै समाजका माथिल्ला वर्गका कर्मचारी, सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई रिजाएर यी बाबाले मकवानपुरमा विगत केही वर्षदेखि लूट मच्याई रहेका छन् । उनको आम्दानीमा राज्यले न कर असुलेको छ । न उनको आम्दानी कुनै सार्वजनिक सम्पत्ती हो । यसको छानबीन गर्ने निकायले खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?